Maxaa lagu dhuftay Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos intii uu ku guda jiray dabaal-degga goolkii uu xalay ka dhaliyey Osasuna? %
Maxaa lagu dhuftay Kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos intii uu ku guda jiray dabaal-degga goolkii uu xalay ka dhaliyey Osasuna?
By Badrudiin Mohamed	 On Feb 10, 2020
Waxaa la isweydiinayaa waxa ay ahaayeen wixii lagu dhuftay kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos intii uu ku guda jiray dabaal-deggii uu sameynayay markii uu gool dhaliyey Osasuna.
Waxa uu Ramos qeyb muhiim ah ku lahaa kulankii ay xalay kooxdiisu 4-1 uga soo adkaatay Naadiga Osasuna oo ay ku booqdeen garoonka El Sadar, isagoo dhaliyey mid ka mid ah goolashii ka caawiyey inay saddexda dhibcood soo qaataan kulankan ka tirsanaa horyaalka La Liga.
Los Blancos ayaa goolka looga naxsaday waxaana ay kooxda martida ah u ahayd qeybtii hore ee ciyaarta mid ay ku dhibtootay inkastoo labo gool oo ay dhaliyeen Isco iyo Ramos ay ka dhigtay in kulankan lagu kala nasto 2-1 ay ku gacan sarreysay Real Madrid.
Markii dib la isugu soo laabtayna Lucas Vazquez iyo Luka Jovic oo bedel ku soo galay ayaa guul raaxo leh siiyey Los Blancos, iyadoo Osasuna looga adkaaday 4-1.
Kabtanka Real Madrid ee Ramos ayaa buuq dhaliyey markii uu qalad ku galay Ruben Garcia, waxaana inta badan dadka la socda ciyaaruhu ay ku doodeen inay ahayd in karaka cas loo taago oo ciyaarta laga saaro Ramos, waxaana uu qaladkaas galay ka hor inta uusan goolka u dhalin kooxdiisa.
Garsooraha ciyaarta waxba kama soo qaadin qaladka uu sameeyey Ramos, waana midda ka carreysiisay Jamaahiirta kooxda martida loo ahaa ee Osasuna, waxaana hadallo aflagaaddo ah kaga dhawaaqayeen fadhiga sare ee garoonka.
‘Ramos adigu is dil’ iyo eyrayo kale ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ay ku dhawaaqayeen Taageerayaasha Osasuna ee ka dhanka ahaa Ramos sida uu daabacay Wargeyska Marca ee ka soo baxa Spain.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in Jamaahiirtu aysan intaas ku ekaane ay ku dareen gacan ka hadal, waxaana daqiiqaddii 38-aad Ramos oo u dabaal-degayay goolka labaad ee kooxdiisa oo uu madax ku dhaliyey ay Taageerayaashu ku soo tuureen walxo loo malaynayo inay yihiin laytarka sigaarka laga shito ama shay kale oo u eg
Barcelona oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Real Betis… +SAWIRRO
Kylian Mbappé Hooyadiis oo sheegtay Kooxda uu Wiilkeedu u ciyaari doono marka uu xagaaga ka tago PSG???